Duqii hore ee Xamar: Waa ballan inaan DF ka joojinno canshuurta magaalada – Kismaayo24 News Agency
Duqii hore ee Xamar: Waa ballan inaan DF ka joojinno canshuurta magaalada
by Mohamed Abdirashid Abaajo 4th March 2019 041
Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir, Cadde Xasan Cali Gaabow ayaa sheegay in dadka degan Caasimadda ay bilaabi doonaan in ay joojiyaan waxyaabaha ay ku taageeraan dowladda dhexe ee Soomaaliya, Maadaama aysan jirin wax loo qabto Shacabka.
Cadde Gaabow waxaa uu sheegay in Magaalada Muqdisho ay ka socdaan dhibaatooyin xooggan oo sababay in maalinwalba ay dhintaan dad shacab ah, oo ay haleelaan Qaraxyadda xilli ay bixiyaan Canshuurta ugu badan Soomaaliya.
Waxa uu wacad ku maray in shacabka Muqdisho ay joojin doonaan Canshuurta ay bixiyaan, maadaama loo diiday dadka kunool gobolka Banaadir in ay yeeshaan Maqaam Siyaasadeed.
“Haddii aan canshuurta na laga qaado waxba na looga qabaneyn, waxaa ballan ah inaan joojino, waana awoodnaa sababtoo ah dadka canshuurta laga qaado waa dakeena, igaarta canshuurta ururisana waa wiilasheena” ayuu yiri Cadde Xasan Cali Gaabow.
Hadalka Cadde ayaa qeyb ka mid ah dadaallo iyo olole isa soo taraya oo ay dadka u dhashay Muqdisho uga hor-tagayaan dowladda federaalka ah ee ku dul nool ayada oo aan waxba u qaban una ogoleyn matalaad rasmi ah.
AL-SHABAAB ayaa sheegay inay kudileen xubno kamid ah ciidamada dowlada qarixii Maka-almukarama
DAAWO WAR CULUS: Madaxweyne Farmaajo oo sheegay inuu dalka ku jiro xaalad degaal kuna baaqay…
Soomaaliya iyo Kenya oo ka wada hadlaya xiisada ka taagan Beledxaawo
Sakariye Sakariye 26th March 2018 26th March 2018
Top News: Axmed Maddobe Oo Soomaalida u Tilmaamey Hal Arin Oo Dan U Ah (Tolow Maxay Tahay???)
Tifaftiraha K24 14th September 2016
Dawo Sawiro: Maandooriyihii ugu Badnaay oo Muqdisho lagu qabtay iyo ganacsato La yaqaan oo fadeexo ay ka soo gaartay
admin 7th April 2016